Xassan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray Xaruntii Ciidamada Cirka ee Muqdisho. | Kobciye24.com
Xassan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray Xaruntii Ciidamada Cirka ee Muqdisho.
Nov 1, 2016 - jawaab
Munaasabadda dib u howlgalinta Xaruntii Ciidamada Cirka ee Afisyoone ayaa waxaa ka qeyb galay taliyaha ciidamada xoogga dalka, taliyaha ciidamada cirka, taliyaha nabad sugidda qaranka, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya.
Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay taliyaha ciidamada cirka ee dowladda Soomaaliya, Gen. Maxamuud Shiikh Cali waxa uuna ku dheeraaday taariikhda ay soo martay xarunta ciidamada cirka oo uu sheegay in ay aheyd meeshii ugu horeysay ee lagu aasaasay ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale taliyaha waxa uu bogaadiyay dhamaan dadkii gacanta ka geystay dib u dayactirka xarunta ciidamada cirka oo in muddo ah aanan lagu shaqeyn.
Ugu danbeyn waxaa munaasabadda soo xiray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xassan Sheekh Maxamuud, waxa uuna ugu horeyntii u mahad celiyay dadkii ka qeyb qaatay dib u dayactirka xarunta ciidamada cirka oo uu sheegay in ay ka muuqatay bur bur xoogan, waxa uuna taliska ciidamada cirka kula dar daarmay in ay dar dar galiyaan howlaha baaxadda leh ee ay u hayaan dalka iyo dadka, si dalka looga samata bixiyo dhibaatada mudada dheer soo jiitameysay.